« prev 1 … 65 66 67 68 69 … 927 next »
Maxkamadda Ciidamada oo dil toogasho ku xukuntay Askari horay u dilay Sarkaal Boolis
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa dil toogasho ku xukuntay Askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabo Maxamed C/raxmaan Ibraahim, kaasoo bishii 10aad ee sanadkii hore dilay Sarkaal Boolis ah oo lagu magacaabi jiray Salaad Xasan Maxamed.
15 qof oo loo xiray is rasaaseyn ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacday magaalada Boosaaso
Sagal Radio Services • News Report • January 15, 2019
Ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhawaacmay is rasaaseyn la sheegay inay u dhaxeysay labo shirkadood oo korantada ka shaqeeya magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso,sida ay mas'uuliyiinta xaqiijiyeen.
Ciidamada Kenya oo weli iskahorimaad kala kulmaya maleeshiyada gudaha u gashay Hotel Dusit
Waxaa weli ka socda Hotel Dusit ee magaalada Nairobi iskahorimaad hubeysan oo ay weli kala kulmayaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowlada Kenya maleeshiyada gudaha u gashay gelinkii dambe ee maanta Hotel Dusit.
Ciidamada Kenya oo gubay Xarun Isgaarsiin oo ay laheyd Shirkadda Hormuud
Ciidamada Kenya ayaa gubay Xarun Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ku laheyd Tuulada Cali Buley oo 30KM dhanka waqooyi kaga beegan degmada Dhoobley ee Gobolka Jubadda Hoose.
Faah Faahin Weerarka Nairobi iyo Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerar ku bilowday qaraxyo oo galabta ka dhacay magaalada Nairobi, gaar ahaan deegaanka Westland oo ay ku yaallaan dhismayaal muhiim ah.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 12, 2019